ဦးနှောကျရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို ထိခိုကျစတေဲ့အမူအကငျြ့တှေ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမရှိတာဟာ နှလုံးရောဂါ၊ အဝလှနျတာ၊ စိတျကရြောဂါ၊ ကငျဆာရောဂါ စတာတှကေို အဖွဈမြားစပေါတယျ။ အလှုပျအရှားနညျးတာက ဦးနှောကျရဲ့ဆဲလျလေးတှကေို ပုံပွောငျးသှားစပွေီး စှမျးဆောငျရညျ လြော့ကစြပေါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျမယျဆိုရငျတော့ မှတျဉာဏျအားကို ပိုကောငျးလာစပွေီး သငျယူမှုတှကေို လှယျကူစပေါတယျ။
2. အလုပျအမြားကွီးကို တဈပွိုငျတညျးလုပျနတော
ဥပမာ ဖုနျးသုံးတာမြိုးပေါ့၊ လမျးကူးရငျး စာပို့နတော၊ စကားပွောနတေုနျး e-mail စဈနတောတှေ။ ဒီလိုလုပျတာက လုပျဆောငျနိုငျစှမျးကို ကဆြငျးစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စိတျဖိစီးကိုဖွဈစတေဲ့ ဟျောမုနျးတှထှေကျစလေို့ ကွာလာရငျ အတှေးတှေ ဝဝေါးလာတာ၊ အာရုံစူးစိုကျမှု မကောငျးတော့တာတှေ ဖွဈစပေါတယျ။
3. သတငျးအခကျြအလကျအမြားကွီး ခေါငျးထဲဝငျလာတာ
တဈထိုငျတညျးနဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ အမြားကွီး သိမျးလိုကျတာမြိုးဟာ ဦးနှောကျကို တရားလှနျ အလုပျပေးလိုကျသလိုဖွဈပွီး ဦးနှောကျမှတျဉာဏျတှကေို ကဆြငျးစပေါတယျ။
4. အကွာကွီး ထိုငျနတော
တဈနရောတညျးမှာ အလှုပျအရှားမရှိ ထိုငျနတောမြိုးက ကိုယျကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစတေဲ့အပွငျ ဦးနှောကျရဲ့မှတျဉာဏျနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့အပိုငျးကိုလညျး စှမျးဆောငျရညျကစြပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အလုပျက ထိုငျပွီးလုပျရတာမြိုး ဆိုရငျတောငျ မကွာခဏ ထပွီးလမျးလြှောကျပေးတာမြိုး လုပျပါ။
ဖုနျးတငျမက TV ၊ tablets ၊ ကှနျပြူတာ၊ games တှေ ပါပါတယျ။ လူတှတေဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တှပွေီ့း ပွောဆိုဆကျဆံကွတာဟာ ဦးနှောကျရဲ့မှတျဉာဏျ၊ စဉျးစားတှေးချေါပုံကို တိုးတကျစပေါတယျတဲ့။ လူအခငျြးခငျြး ဆကျဆံတဲ့အခြိနျတှေ နညျးလာပွီး Screen ကွညျ့ခြိနျ မြားလာတာဟာ အထီးကနျြလာတာ၊ စိတျကရြောဂါ ရလာတာမြိုးတှအေထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မကျြစိ၊ နား၊ လညျပငျး၊ နောကျကြော စတာတှကေိုပါ ကွာလာရငျ ထိခိုကျစပေါတယျ။
6. နားကွပျတှေ အသုံးမြားတာ
နားကွပျတပျပွီး အသံကယျြကယျြ နားထောငျတာဟာ အကွားအာရုံကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ နားက ကောငျးကောငျး မကွားရတော့တဲ့အခါမှာ နားလညျအောငျ ဦးနှောကျက ပိုပွီးအလုပျလုပျရပါတော့တယျ။
7. အိပျရေးဝဝ မအိပျတာ
အိပျရေးမဝတာဟာ တုံ့ပွနျမှုမကောငျးတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ၊ စိတျမကွညျတာ၊ မှတျဉာဏျမကောငျးတာ၊ သှေးတှငျးသကွားဓာတျတှေ တကျလာတာ စတာတှေ ဖွဈစပေါတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ ဦးနှောကျကို ကြုံ့လာစပေါတယျတဲ့။ အိပျရေးမဝရငျ ဦးနှောကျရဲ့စဉျးစားတှေးချေါပုံ၊ မှတျဉာဏျ၊ ဆုံးဖွတျခကျြခတြာတှကေ မမှနျနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ တဈရကျကို ၇-၈ နာရီလောကျ အိပျသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှသာ ဦးနှောကျက ကောငျးကောငျး အလုပျလုပျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
8. သကွားပါသောအခြိုရညျမြား ကာလရှညျ လှနျကဲစှာသောကျသုံးခွငျး
သကွားပါတဲ့ အခြိုရညျတှကေ သောကျပွီးသှားရငျ ခဏတာ အားရှိလနျးဆနျးသှားသလို ဖွဈသှားပမေယျ့ သကွားဓာတျရဲ့ အရှိနျကုနျသှားတဲ့အခါ စိတျမကွညျမလငျဖွဈတာမြိုးတှေ ခံစားရတတျပါတယျ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတာဟာ နှလုံးရောဂါ၊ အဝလွန်တာ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ စတာတွေကို အဖြစ်များစေပါတယ်။ အလှုပ်အရှားနည်းတာက ဦးနှောက်ရဲ့ဆဲလ်လေးတွေကို ပုံပြောင်းသွားစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မှတ်ဉာဏ်အားကို ပိုကောင်းလာစေပြီး သင်ယူမှုတွေကို လွယ်ကူစေပါတယ်။
2. အလုပ်အများကြီးကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်နေတာ
ဥပမာ ဖုန်းသုံးတာမျိုးပေါ့၊ လမ်းကူးရင်း စာပို့နေတာ၊ စကားပြောနေတုန်း e-mail စစ်နေတာတွေ။ ဒီလိုလုပ်တာက လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဖိစီးကိုဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေထွက်စေလို့ ကြာလာရင် အတွေးတွေ ဝေဝါးလာတာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု မကောင်းတော့တာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
3. သတင်းအချက်အလက်အများကြီး ခေါင်းထဲဝင်လာတာ
တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အများကြီး သိမ်းလိုက်တာမျိုးဟာ ဦးနှောက်ကို တရားလွန် အလုပ်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်တွေကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
4. အကြာကြီး ထိုင်နေတာ
တစ်နေရာတည်းမှာ အလှုပ်အရှားမရှိ ထိုင်နေတာမျိုးက ကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့အပြင် ဦးနှောက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုလည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အလုပ်က ထိုင်ပြီးလုပ်ရတာမျိုး ဆိုရင်တောင် မကြာခဏ ထပြီးလမ်းလျှောက်ပေးတာမျိုး လုပ်ပါ။
ဖုန်းတင်မက TV ၊ tablets ၊ ကွန်ပျူတာ၊ games တွေ ပါပါတယ်။ လူတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံကြတာဟာ ဦးနှောက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကို တိုးတက်စေပါတယ်တဲ့။ လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တွေ နည်းလာပြီး Screen ကြည့်ချိန် များလာတာဟာ အထီးကျန်လာတာ၊ စိတ်ကျရောဂါ ရလာတာမျိုးတွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျက်စိ၊ နား၊ လည်ပင်း၊ နောက်ကျော စတာတွေကိုပါ ကြာလာရင် ထိခိုက်စေပါတယ်။
6. နားကြပ်တွေ အသုံးများတာ
နားကြပ်တပ်ပြီး အသံကျယ်ကျယ် နားထောင်တာဟာ အကြားအာရုံကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ နားက ကောင်းကောင်း မကြားရတော့တဲ့အခါမှာ နားလည်အောင် ဦးနှောက်က ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ရပါတော့တယ်။
7. အိပ်ရေးဝဝ မအိပ်တာ
အိပ်ရေးမဝတာဟာ တုံ့ပြန်မှုမကောင်းတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ စိတ်မကြည်တာ၊ မှတ်ဉာဏ်မကောင်းတာ၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်တွေ တက်လာတာ စတာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဦးနှောက်ကို ကျုံ့လာစေပါတယ်တဲ့။ အိပ်ရေးမဝရင် ဦးနှောက်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ၊ မှတ်ဉာဏ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေက မမှန်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်ကို ၇-၈ နာရီလောက် အိပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဦးနှောက်က ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
8. သကြားပါသောအချိုရည်များ ကာလရှည် လွန်ကဲစွာသောက်သုံးခြင်း
သကြားပါတဲ့ အချိုရည်တွေက သောက်ပြီးသွားရင် ခဏတာ အားရှိလန်းဆန်းသွားသလို ဖြစ်သွားပေမယ့် သကြားဓာတ်ရဲ့ အရှိန်ကုန်သွားတဲ့အခါ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာမျိုးတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။